Sida loo rakibo Xafiiska Online-ka Ubuntu 16.04 | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalayaal badan oo ka haaji Windows ama Linux Looma baran inay isticmaalaan baakadaha xafiiska bilaashka ah ee hadda jira, in kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo beddeli kara Office Tan wali waxaa isticmaala malaayiin isticmaale. Maalmo ka hor ayay noo soo qoreen iyagoo na weydiinaya sida ay u awoodaan ku rakib Office Online on Ubuntu 16.04 markaa waxaan u dhaqaaqnay inaan raadino sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee wax loo qaban karo.
Casharradan soo socda ayaa noo oggolaan doona inaan ku rakibno Xafiiska Online-ka ee Ubuntu 16.04 iyo tan ka soo baxda, si otomatig ah iyo dhammaan ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan qoraal aad u fiican oo ay ku jiraan nidaamyada lagama maarmaanka u ah Xafiiska Online-ka inuu si fiican u shaqeeyo.
Xafiiska Online - Sawirka: Omicrono
Tallaabooyinka lagu rakibo Xafiiska Online-ka ee Ubuntu 16.04
Nidaamku wuxuu socon karaa dhowr saacadood, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad adeegsato nooc kale oo kale haddii ay dhacdo in howshaadu aysan ahayn mid xoog badan
Nidaamka rakibaadda Xafiiska Online-ka ah ee adeegsanaya qoraalkan wuu yara yarayn karaa, markaa ha ka nixin haddii rakibeyntu qaadato waqti dheer.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa isku xirka kaydinta sarkaalka qoraalka
Kadib waxaan aadeynaa galka cusub ee cloned oo aan u fulinaa .sh as sudo
Marka qoraalka la dhammeeyo fulintiisa, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku raaxeysano dhammaan barnaamijyada qadka Office Online, hawshu way fududahay oo haddii digniinta qaarkood u muuqdaan, waan iska indho tiri karnaa maadaama ay yihiin xirmooyin qaarkood oo laga tagi karo.
Haddii aan rabno inaanu maamulno adeegga, qoraaga qoraalkani wuxuu noo sheegayaa inaan ku qaban karno innagoo adeegsanayna nidaam:
Marka xalkan fudud waxaan ku adeegsan karnaa qolka xafiiska ee 'Office Office'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo rakibo Xafiiska Online-ka Ubuntu 16.04
Tabaruc aad u fiican
miyaanay ahayn oo kaliya in laga furo xafiiska.com shabakadda biraawsarka oo dhammaad?
Hagaag, waxaa jira dad jecel inay otomaatigooda xafiiskooda ku dhex daraan nidaamka qalliinka isla markaana iyaga ay u dareemeyso wax dhab ah iyaga marka loo eego furitaanka biraawsarka
Ku jawaab jolt2bolt
Tani waa in lagu rakibo libreoffice online; S
Ma aha xafiiska microsoft ee khadka tooska ah, laakiin waa libreoffice khadka tooska ah. Sidee loo tirtiraa?
Ku jawaab Troisi
Alvaro rodriguez dijo
Waxaan haystaa xubuntu 16.04 mana ii shaqeyso.
Jawaab Alvaro Rodriguez
Mudane Paquito dijo
Waxaan kuu sheegi doonaa inaan isku dayay inaan ku rakibo mashiin farsamo leh Ubuntu 16.04. Ma aqaano inta rakibku sameyn karo, laakiin waxay qaadan kartaa in ka badan nus saac ... wayna socotaa ...
Ma aqaano natiijada ugu dambeysa ee ay noqon doonto, laakiin waxaan kugula talin lahaa Lagarto inay kaala taliso faahfaahintaan yar yar maqaallada sidan oo kale ah ... mid ayaa caadeystay inuu Linux ku qaato waqtiyada rakibidda oo macquul ah iyo, dabcan, aad uga gaaban kan, iyo, haddii uu ogaan lahaa , Waan ka tagi lahaa waqti aan waqti badan haysto… maxaa yeelay rakibiddu waxay qaadataa caro dhab ah!
Waa lagu wargaliyay!
Jawaab Señor Paquito
Waxaan u soo xiganayaa hadal ahaan wixii aan ku qoray maqaalka waqtigaas
"Nidaamka rakibaadda Xafiiska Online-ka ah ee adeegsanaya qoraalkan xoogaa wuu gaabin karaa, markaa ha ka nixin haddii rakibeyntu qaadato waqti dheer."
Waxaan u maleynayaa inaadan dareemin afeefinta loo muujiyay sida fariin qoraal ah oo ku jirta koodhka ilaha qoraalka laftiisa, oo aad ka dhex arki karto keydka lagu daabacay maqaalkan:
"RASUULKU WUXUU QAADAN DOONAA WAQTI BADAN, 2-8 SAACADOOD (Waxay kuxirantahay xawaaraha adeegahaaga), EE SAMIR SII BADAN !!!"
Taasi waa, rakibidda waxay qaadan kartaa laba illaa siddeed saacadood. Xanaaq, haa, laakiin kan wax digayaa khaayin maahan 😉
Ku jawaab Felfa
Waa salaaman tahay, Felfa.
Anigu kuma hadlo Ingiriisiga iyo, inkasta oo aan fahmi karo oo aan turjumi karo qoraalka aad tixraacayso, inta badan ma booqdo bogagga noocan ah, maaddaama oo aanan akhrin koodhka ilaha midkoodna; Anigu waxaan ahay adeegsade fudud waxaanan u arkaa af qalaad. Taasi waa, anigu ma eegi karin "afeefta" maxaa yeelay ma aanan marin bogga wax lagu keydiyo, laakiin waan aqriyay maqaalka, kaas oo qoraalkiisa aysan macquul aheyn in lagala soo baxo in muddada rakibaadda ay qaadan karto dhowr saacadood.
Digniin ayaa la soo saaray, si dadka isticmaala mustaqbalka wax dhibaato ah kala kulmin waqtiga rakibida
Runtii, Lizard, iskuma uu dayin inuu abuuro khilaaf. Waxaan aqriyay faallooyinka ah in rakibidu ay yara yaraan karto, laakiin waxay ahayd dhowr saacadood mana dhamaan ... nus saac waxay umuuqatay waqti badan si aan uguqalmo rakibida inay tahay mid aad gaabis u ah, laakiin waqtigan mar hore ayaan riyoonayaa! Waxay qaadataa in ka badan laba saacadood walina ma dhamaan!
Waxaan ku celinayaa markale, iskuma dayin inaan abuuro khilaaf, dabcan waa lagu qanacsan yahay inaad la wadaagto aqoontaada si isxilqaan ah, laakiin hal shay waa waxyar oo gaabis ah, mid kalena waa rakibid that ka badan laba saacadood !!! Waa waxashnimo! Oo weli ma jiraan calaamado muujinaya inay dhammaanayso!
Waxaan naftayda ugu jawaabayaa inaan kuu sheego taas, ugu dambayntii, waa inaan iska daayaa rakibaadda Xafiiska Online-ka, maxaa yeelay rakibaaddu waxay qaadatay muddo dheer oo aan ku khasbanaaday inaan qabsado shaqo aan kaga tago mashiinka. Markii aan baxay, durba waxay ka badnayd saddex saacadood. Markii aan soo noqday, ka dib afar saacadood ka dib (oo waxay noqon doontaa toddobo, ugu yaraan) waxaan helay wadahadal u baahan aqbalaad, waan horay u aqbalay, laakiin waxay soo celisay qalad aanan xasuusnayn oo rakibiddu aysan dhammaan. Markaan la kulmo xaaladdan oo kale, weligay maskaxdayda kuma soo dhicin inaan mar kale isku dayo.
Caydaydu, oo aan wax culus ahayn, ama aan ku talo jirin inaan cid ku dhibaateeyo, ayaa si fudud diirada u saaraysa hagaajinta tilmaamaha ku saabsan wakhtiga rakibidda ee lagu sameeyay maqaalka, kaas oo lagu sheegay in nidaamka rakibaadda «uu noqon karo a gaabis yar ”, waxaana qabaa inay aad uga fiicnaan lahayd in la muujiyo inay socon karto dhowr saacadood.
Aniga dhankeyga, hadii aan fikrad xun kaheli lahaa waqtiga rakibida, xitaa ma aanan isku dayin waxayna ila badbaadin laheyd waqti iyo lacag biilka korontada. Taasi waa, iyada oo la tixgelinayo in aan ka hadlayno saacado badan oo rakibid ah, waxaan u maleynayaa inay xaq tahay in la soo jeediyo in qodobku si cad uga digayo.
Sida iska cad, haa, waa qoraaga waa inuu qiimeeyaa, tilmaam sax ah ayaa iga badbaadin laheyd waqti badan.
Microsoft Office ma waxaad rakibtaa? Sidee shatigu u shaqeeyaa?
Waa wax lagu qoslo in la arko iyaga oo tagaya Linux sababta oo ah waxay neceb yihiin wax kasta oo uraya sida Microsoft, waxa ugu horreeya ee ay ka raadsadaan gudaha Linux waa waxyaalahan nacasnimada ah iyo sida loo rakibo Khamriga, playonlinux, mashiinnada dalxiis ee leh sawirrada Windows, taas oo ah, waxay rabaan in distoorkoodu shaqeeyo dhamaan MS.
Ku jawaab Belux
Dhammaanteen kuwa isbeddel sameeya ma nihin sidan. Xaaladdayda, shaqada darteed, ma joojin karo isticmaalka xafiiska Microsoft. Sidoo kale, waxaan u baahanahay inaan isticmaalo barnaamijyo kale oo aan lahayn noocyo kale oo bilaash ah ama, haddii ay leeyihiin, uma fiicna sida dhiggooda ganacsiga. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira dhibaato ah soo saarista faylal la jaan qaadi kara si markaa wax looga beddelo kumbuyuutarro kala duwan Waa shahiid, laakiin dadaal ayaa la sameeyay. Intaad caytami lahayd, baro oo faham.
si fiican uma aanan awoodin:
"Officeonline-install.sh: 293: officeonline-install.sh: Cilad syntax: dib u habeyn lama filaan ah"
Ku jawaab viriato
waxaad isticmaali laheyd # sudo ./officeonline-install.sh
Sidee waxani looga furey? oo sidee u tirtiraa isticmaalaha lool
Waxaan ku biirayaa su'aashaada… sidee baa loo furey?
Amarro loogu talagalay Arch Linux in dhammaan isticmaaleyaashaadu ay ogaadaan